ဝါးခယ်မ : သူတို.ဖွင်.ဆိုတဲ့ Cute , Sexy & Beautiful
သူတို.ဖွင်.ဆိုတဲ့ Cute , Sexy & Beautiful
မိန်းကလေး တွေဟာ သူတို့ကို ယောင်္ကျား လေး တွေဘက်က "Cute" ၊ "Sexy" ၊ "Beautiful" စတဲ့ တင်စား ပြီး ပြောဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်လိုသလိုပဲ ဆွဲတွေးနေခဲ့ကြပါတယ်။မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သူ့ကို "Cute" ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ယောင်္ကျား လေး တစ်ယောက်က ပြောလာတဲ့အခါမှာ သူမ မြင်ယောင်မိတာက ကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ အသွင်အပြင်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာမိန်းကလေး တွေရဲ့ ရှုထောင့်က နားလည်ထားတာပါ။ယောင်္ကျား လေး တွေ ရဲ့ ရှုထောင့်ဘက်ကတော့ အရာအားလုံး တစ်ထပ်တည်း မကျနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ယောင်္ကျား လေးတွေ ဘက်က ရည်ညွှန်းလိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် အချို့ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောင်္ကျား လေး တစ်ယောက်က "Cute" လို့ သုံးစွဲတဲ့အခါ
မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို Cute လို့ တင်စားခြင်းဟာ ညှို့ဓါတ် ၊ ဆွဲဆောင်မှု အားလုံးကို ရည်ညွှန်းတာတော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို Cute ဖြစ်တယ်လို့ တင်စားခြင်းဟာ ထိုမိန်းကလေးကို အနည်းငယ် တန်ဖိုး ကျသွားစေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Cute ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ခွေးလေးတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို သာ အသုံးများလို့ပါ။
Cute ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး တွေဟာ ယေဘူယျအားဖြင့် ချဉ်းကပ်ဖို့ လွယ်ကူကြပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်တော့ Cute ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး တွေဟာ နူးညံ့ပြီး လူငယ်ဆန်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက "Cute" ဆိုတဲ ဂုဏ်ပုဒ်ဟာ Pretty နဲ့ Beautiful စတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ တင်စားလို့ မရလို့ သုံးစွဲတယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် တစ်ကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Cute ဖြစ်အောင် လုပ်ယူလို့ မရပါဘူး။ သူ့ဘာသာသူဖြစ်လာတာပါ။ ဒါကြောင့် ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို Cute ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့အခါမှာ ထိုမိန်းကလေးဟာ လူငယ်ဆန်လို့ ၊ နူးညံ့လို့ ၊ ကလေးငယ်တွေလို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နေထိုင်ပုံတွေ ရှိနေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယောင်္ကျား လေး တစ်ယောက်က "Sexy" လို့ သုံးစွဲတဲ့အခါ
မိန်းကလေး တစ်ယောက် "Sexy" ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုတော့ အဲဒီမိန်းကလေး ကိုယ်တိုင် ပဲ သိမှာပါ။ Sexy ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အထာ တစ်ခုတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Sexy ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေး တွေဟာ သူတို့အထာ အတွက်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို "Sexy" ဖြစ်တယ်လို့ တင်စားတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ အမှန်တစ်ကယ်က Sexy ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အိပ်ခန်းထဲက လိင်ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ လုံခြုံစွာ ၀တ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ စကတ်တိုဝတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ထက်ပင် Sexy ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Sexy ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟာ Sexy ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ၀တ်ထားဝတ်ထားကါ။ Sexy ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အ၀တ်အစားနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတော့ Sexy ဖြစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အာရုံခံစားမှု တစ်ခုရှိပါတယ်။ Sexy ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ အဓိက ဆွဲဆောင်မှုဟာ အပေါ်ယံ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာတည်ရှိနေတာပါ။ ယောကျာင်္းသားတွေ အလွယ်တကူမသိနိုင်တဲ့ ဆန်းပြားမှု တစ်မျိုးပါပဲ။ ဥပမာ ပြောရရင်တော့ အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီဟာ အပေါ်ယံမှာ လှတယ်လို့ မထင်ရပေမယ့် ယောကျာင်္းသားတွေအတွက်တော့ အလွန်တရာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ယောကျာင်္းလေးတွေဘက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို "Sexy" ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ တင်စားလာတာဟာ ထိုမိန်းကလေးရဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ၊ အတွင်းစိတ်တွေကို နားလည် သဘောကျ သွားလို့ပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ယောင်္ကျား လေး တစ်ယောက်က "Beautiful" လို့ သုံးစွဲတဲ့အခါ
ယောကျာင်္းလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို "Beautiful" လို့ တင်စားတဲ့အခါမှာ သူပြောချင်တာက ထင်ထားတာထက် ပိုလေးနက်နေပါတယ်။ အလှတရားဆိုတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ။ ဒါပေမယ့် Beautiful ဆိုတဲ့ စကားဟာ စိတ်အတွင်းပိုင်းရဲ့ လှပမှု ကိုပါ ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက် "Beautiful" ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာ "Cute" တို့ ၊ "Sexy" တို့ထက် ခက်ခဲပါတယ်။
လူတွေဟာ "Beautiful" လို့ပြောတဲ့အခါမှာ ရိုးရှင်းတဲ့ အကျီင်္ ၊ ဘောင်းဘီ ၊ ဆံပင်ပုံစံ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ မိတ်ကပ် အနည်းငယ်သာ လိမ်းထားတဲ့ ပုံကိုထင်ကြပါတယ်။ အမှန်တစ်ကယ်ကတော့ Beautiful ဆိုတာဟာ အ၀တ်အစားတွေ ၊ မိတ်ကပ် ခြယ်သပုံတွေနဲ့ လားလားမျှ မဆိုင်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို "Beautiful" လို့တင်စားခြင်းဟာ ထိုမိန်းကလေး ရဲ့ အပေါ်ယံ အ၀တ်အစားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုမိန်းကလေးရဲ့ ရိုးသားတဲ့ အတွင်းစိတ်ကိုပါ စွဲလန်း နှစ်သက်မိသွားတဲ့ ယောကျာင်္းလေးတွေသာ "Beautiful" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သုံးစွဲကြပါတယ်။
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 8:46 AM
Labels: ဗဟုသုတဆိုင်ရာများ, အတွေးအမြင်.နှင်. သုတ ရသ စာစုများ
နိုင်ငံခြား သွား အလုပ်လုပ်ချင် သူများအတွက် ( ၂ )
နိုင်ငံခြား သွား အလုပ်လုပ်ချင် သူများအတွက် ( ၁ )
Second Gathering & Meeting of AMTA ( Association o...
MWRN ၏ Training for Trainer ( 5/6 December 2015 )
ကိုက်လန် ရဲ. ကျန်းမာရေး အကျိုးပြု ဆယ်ချက်